ThaBarWa Centre: Programme : Meditation Retreat at Bodhi Heart Sanctuary (22nd to 27th February 2014)
Programme : Meditation Retreat at Bodhi Heart Sanctuary (22nd to 27th February 2014)
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရ မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ ပီနန်မြို့ ဗောဓိဟတ်(တရားရိပ်သာ) တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက် မှ ၂၇ ရက်ထိ တရားစခန်းဖွင့်ကာ အနတ္တတရားဟောကြားမည် ဖြစ်သည်။
There will bea7-days meditation retreat by Thararwa Sayadaw U Ottamasara at Bodhi Heart Sanctuary, Penang, Malaysia from 21st to 27th February 2014.
Thabarwa Sayadaw U Ottamasara will be teaching Anatta Dhamma both in English and Myanmar languages.
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တိုက်ရိုက် ဟောကြားပြီး တရားဟောကြားစဉ်ရက်အတွင်း မတ်လ ၂၂ မှ ၂၆ ရက်အတွင်း pulau tikus market and Mt Eskine market များ သို့ ဆွမ်းခံ ကြွရောက်မည်ဖြစ်သည်။
During the retreat period, from 22th to 26th February 2014, Thabarwa Sayadaw U Ottamasara will be going for moring alms rounds at Pulau Tikus Market and Mt. Eskine Market between 7:00 am to 7:30am.